Kodi 19.2 inouya kuXbox, inogadzirisa madhigi muWindows uye inovandudza iyo PVR | Linux Vakapindwa muropa
Yakanga yavapo kwemazuva mashoma, asi sezvo ini ndanga ndisina kusiya iyo yekuvandudza muManjaro (flatpak), uye ndakanga ndisina kushandisa Raspberry Pi mukati mevhiki, ndakanga ndisati ndaziva. Kusvika nhasi. Musi waGumiguru 8, chirongwa icho chinogadzira chirongwa icho chaimbodaidzwa kuti XBMC yakakanda Kodi 19.2. Ndiyo yechipiri poindi yekuvandudza ye Matrix, uye nekudaro, zvasvika kupolish zvinhu kumusoro kweiyo 19 vhezheni yesoftware.
Pakati pekugadziriswa pane zvakawanda izvo gadzirisa matambudziko ane chekuita neMicrosoft software. Mamwe mabhugi akagadziriswa muWindows, pakupedzisira achiuya kuXbox, uyezve zvishoma zvezvose. Semuenzaniso, akati wandei kukiya / kuturika zvakagadziriswa paPVRs, uye izvo zvinobatsira vashandisi veLinux zvakare. Pazasi iwe une rondedzero yeshanduko yakaunzwa pamwechete neKare 19.2.
Kodi 19.2 Matrix inosimbisa
Kukundikana kuwana isiriyo PVR chiteshi kubva kune vaunoda.
Kupwanya pakutanga kana uchitsvaga akashaikwa echiratidzo mifananidzo.
Tsaona pakutangisa inokonzerwa nekushaikwa kwetimer mhando.
"Bvisa zvachose" zvinyorwa kubva mumarara.
Dzimwe diki diki kugadzirisa.
Muraibhurari yevhidhiyo, buggi rakagadziriswa iro rakabvisa maUniqueIDs apo raibhurari yakaongororwa, zvichikonzera maitiro asingatarisirwe emapulagi anoenderana nemaID iwayo.
Muchikamu chemitambo, shanduro dzakawedzerwa kune emulators uye plugins yemitambo.
Nezve ma network, manejimendi emamwe mameseji muwebhusocket.
Mune ekuwedzera-ons, iyo yekuratidzira pfungwa yevakuru uye wechitatu-bato ma module akagadziriswa.
Yakagadziriswa inogona kuitika paunenge uchichinja monitors nekuda kwekuwedzera Hardware / kubvisa.
Yakagadziriswa odhiyo passthrough isingashande (zvisingaite) pane mamwe masisitimu kana skrini yekuvandudza mwero iri.
Iyo kurasa chinjana chinjana chinoshandiswa pane ese Windows 10 masisitimu akagadziridzwa kunyangwe kana iyo giraidhi mutyairi isingatsigire mazvino mazinga eDirectX maficha.
Iyo 10-bit chinjana tambo iyo inoshandiswa nekumisikidza pane Windows 10 masystem kana iratidziro yeHDR yakaonekwa (zvakare ye8-bit SDR mavhidhiyo masosi) yakagadziridzwa.
Yakagadziriswa inogona kuitika WS-Discovery inoenderana nekuparara kana uchibatanidza isiri-komputa zvishandiso (semuenzaniso IP kamera) kune imwechete network.
Yakagadziriswa inogona kuitika kana HDR inobvumidzwa / yakaremerwa kunze kubva Windows 10 kuratidza masetingi.
Yakagadziriswa yakashaikwa pikicha kana yakasarudzika dema nhanho ine mamwe mavhidhiyo madhiraivha kana yakaganhurirwa renji kuburitswa inogoneswa pamwe pamwe neDXVA2 Hardware kumhanyisa uye HDR kupfuura-kuburikidza.
Pa Android, ekunze ekuchengetera mavhoriyamu asiri kuoneka pane zvishandiso zvinomhanyisa vhezheni sisitimu yekushandisa yakagadziriswa.
Kodi 19.x ikozvino yavapo.
Kupunzika mu4K HEVC vhidhiyo yekutamba nekuda kwekunze-kwe-ndangariro mamiriro.
Iyo graphical mushandisi interface yakashandura pa1080 uye yakakwidziridzwa ku4K pachinzvimbo chemuno 4K.
4K resolution yakashumwa zvisirizvo mumatanda sa 1920 × 1080.
Kutadza kumisikidza "Chinja skrini yekuvandudza mwero pakutanga / kumira" ine resolution ye4K.
Kuratidzira mamepu hakushandiswe nekusarudzika muHDR video yekutamba.
Kushaikwa kweruzivo nezve iyo skrini yekuvandudza mwero muvhidhiyo yekugadzirisa ruzivo ruzivo (Alt + O).
Kubatika kweInternet SSL kwanga kusiri kushanda nekuti yakadzamidzirwa CA chitupa nzira pasuru yaisagona kushandiswa.
Kuita kwecheni yekuchinjanisa uchishandisa DXGI_SWAP_EFFECT_FLIP_DISCARD.
Iyo 10-bit chinjana tambo nzvimbo inoshandiswa kana HDR-inokwanisa TV (kunyangwe ye8-bit SDR mavhidhiyo) akaonekwa.
Iko mashandiro eHEVC DXVA2 decoder akagadziridzwa achishandisa ekumisikidza nzvimbo dzakaenderana kune 128 mabheti.
Inofumura iyo icon nzira ye EPG tag se "thumbnail" chivakwa.
Inofumura iyo serial nhamba yeiyo EPG tag seye 'seasonnum' chivakwa.
Kodi 19.2 ikozvino iripo en Flathub, uye inofanira kukurumidza kusvika kumahofisi epamutemo ekuparadzirwa kweLinux, kunze kwekunge iwe uchishandisa Debian kana zvigadzirwa, mune izvo kesi zvinokurudzirwa kuwedzera iyo projekiti repository kana kugara paKare 18.7 kwechinguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Kodi 19.2 inosvika pamwe nekuvandudzwa muWindows, PVR uye zvimwe zvinogadziriswa